Nagu saabsan - Wuxi Co-Eeg xirxirida Co., Ltd.
1.Supplier for Brands Maui Jim, Costa, Spy, Komono, BCBG, Fielmann iwm
2.Waxaa kujiraa muraayadaha indhaha oo kala duwan, muraayadaha muraayadaha, kiisaska muraayadaha indhaha, alaabada daryeelka muraayadaha indhaha iwm.
3.OEM. Aqbal amarka tijaabada tirada yar.
Khibrad 4.10 +, CO-See waxay siisaa adeeg gaar ah.
5.Xirfadlayaal xirfadlayaal ah, waxay bixiyaan adeeg macmiil 24-saac khadka tooska ah
Waxaan leenahay macaamiil ka badan 30 dal oo sumcaddeena wanaagsan ayaa ku dhex jirta macaamiisha cusub iyo kuwii horeba.
Waxaa naga go'an inaan siino dhammaan noocyada kiiska muraayadaha oo tayo sare leh iyo naqshadeynta agabyada iyo adeegyada wax soo saarka ee macaamiisha adduunka.
Kooxaheena iibinta waxay la socdaan xirfad sare iyo khibrad. Waxaan u fidinaa adeegga tooska ah ee 24-ka saac macaamiishayada adduunka oo idil, annagoo ka jawaabeyna su'aalaha ku saabsan maaddada, cabbirka, astaanta iyo habeynta xirmooyinka kale.
Maaddaama aan nahay soo saare, waxaan bixinnaa soo iibin qiimo jaban, dukaameysi hal-joogsi ah iyo kormeer tayo leh.
Waxaan bixinaa xirmo alaab deg deg ah iyo shixnad waqtigeeda ku socota. Baakadeynteenu waxay yareyn doontaa dhaawaca soo gaara alaabada habka gaadiidka iyo wareejinta inta suurtagal ah, waxay hubineysaa badqabka badeecadaha, waxay sahlaysaa keydinta, gaadiidka, rarka iyo rarka, waxayna dardar galineysaa kormeerka barta wareejinta.
U hogaansanaanta cibaadadayada si aan u qancino dalabyada baakadaha ee macaamiisha, waxaan sahamineynaa dhammaan noocyada beeraha si aan u dhexgalno silsiladaheena iyo kheyraadkeena, si aan ugu fidino macaamiisheena adeegga adeegsiga hal-joogsi, ugu fiican uguna kalsoonida macaamiisha.